Sidee u Shaqeeyaa Fryer-ka Bilaashka ah ee Saliidda? 【 Faa'iidooyinka iyo khasaaraha】
Sidee u Shaqeeyaa Fryer-ka Bilaashka ah ee Saliidda? Faa'iidada iyo khasaaraha
Miyaad heshay "shiilan aan saliid lahayn" laakiin ma ogi inay run ahaantii shaqeeyaan? Isticmaalayaal badan ayaa shaki ka qaba faa'iidooyinkeeda, haddii ay dhab ahaantii waxtar u leeyihiin shiil, haddii ay caafimaad qabaan iyo xitaa haddii ay yihiin cuntooyin.
Qodobkaan Waxaan cadeyneynaa dhammaan shakiyada Falanqaynta sida ay u shaqeeyaan, natiijooyinka ay bixiyaan iyo wax ka badan. Soo ogow faa'iidooyinka iyo khasaaraha!
▷ Saliid la'aan ma ku shiili kartaa?
Waa arrintii ugu horreysay ee maskaxdayda ku soo dhacday markay ii sheegeen kuwan Fryers-qoto dheer, sababtoo ah shiilan bilaa saliid ah dhawaaqyo is burinaya, waana runtii.
para shiil sida saxda ah, cuntadu waa in si buuxda loogu dhex geliyo saliid aad u kulul, iyo ma jirto waddo kale oo lagu gaaro natiijo la mid ah. Markaa ha filanin inaad iibsato hawo kulul iyo in cuntadaadu la mid noqon doonto kuwa ku jira shiilan koronto caadiga ah, sababtoo ah waad niyad jabi doontaa.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad jeceshahay inaad daryeesho cuntadaada oo aadan rabin inaad gabi ahaanba iska dayso croquettes ama chips, waxay noqon karaan doorasho aad u wanaagsan. Akhriso oo ogow sida ay runtii u shaqeeyaan!
▷ Hawlgalka Fryer-ka kulul
Inkasta oo loo yaqaan shiilan aan saliid lahayn, haa way isticmaalaan, badiyaa qiyaastii qaado qaado. Nooc kastaa wuxuu leeyahay astaamo iyo shaqooyin kala duwan, laakiin mabda'a aasaasiga ah ee hawlgalka waa isku mid ah dhammaan.
Iska caabin koronto kululeeyo hawada, Waxaa lagu faafiyaa marawaxado ka mid ah cuntooyinka lagu beeray lakabka khafiifka ah ee saliidda. Nidaamkan waxaa lagu gaaraa in cuntadu ay sii jirto dahab dibadda ah, sidii iyagoo la shiilay, laakiin ma helaan dhadhan la mid ah sida qolof leh.
Sida aad arki karto, waxay noqon doontaa mid sax ah in la yiraahdo waxay yihiin foornooyinka convection-ka yar ama xitaa shiilaya hawada kulul. Runtii maaha tignoolajiyada cusub ee kacaanka, laakiin Waxay leedahay faa'iidooyinkeeda waxaana jira dad ku faraxsan qalabkan yar.
▷ Faa'iidooyinka shiilan aan saliid lahayn
Sida wax kasta oo nolosha ah, shiilan cusub ayaa leh faa'iidooyinkooda laakiin sidoo kale dhibco daciif ah. Aynu aragno kuwa ugu caansan:
✔ Cuntooyinka dufanku ka yar yahay shiilanyada caadiga ah.
✔ Waxaad lacag ku kaydsanaysaa Saliidda, maadaama ay isticmaalaan hal qaado oo keliya.
✔ Way ka nadiifsan yihiin: Waxay ka fogaadaan qulqulka, qiiqa iyo urta.
✔ Way fududahay in la isticmaalo: Uma baahna feejignaan marka ay buuxinayaan.
✔ Way fududahay in la nadiifiyo: Badankoodu weelku waa badbaado.
✔ Way kala duwan yihiin: Waxa loo isticmaali karaa in lagu diyaariyo boqollaal cuntooyin.
▷ Khasaaraha ka dhashay Fryers-ka
⚠ Qiimaha ayaa ka sarreeya Fryers-ka caadiga ah
⚠ Cuntadu way ka qallafsan tahay marka loo eego shiilitaanka caadiga ah
⚠ Guud ahaan way yara gaabis yihiin (Waxay ku kala duwan yihiin moodooyinka iyo hadba culayska)
⚠ Wuxuu u baahan yahay muddada la qabsiga si uu u helo barta
Qaar baa aaminsan inay isticmalaan tamar koronto oo badan sababtoo ah way ka gaabiyaan kuwa caadiga ah, laakiin tani gabi ahaanba sax maaha. Maskaxda ku hay in korantadu ay inta badan ka hooseyso shiilanyada caadiga ah iyo foornooyinka, taas oo ka dhigaysa wakhtiga.
Fiidiyow ku saabsan Hawlgalkiisa
Inkasta oo ay ku qoran tahay Ingiriisi, muuqaalkan waxaad si cad u arki kartaa sida shiilan loogu kariyo tignoolajiyada hawada degdega ah ee kulul
Kuwani waa qaar ka mid ah shakiyada soo noqnoqda ee soo baxa marka ay timaado Tixgeli haddii shiilan aan saliid lahayn uu mudan yahay iibso.
✅ Sidee loo isticmaalaa Fryer-ka Kulul?
Mid ka mid ah wanaagga noocan ah ee shiilan waa fududeynta isticmaalka, inkasta oo ay run tahay in bilowga hore ay tahay inaad hesho barta waqtiyada iyo heerkulka. Marka laga soo tago tan, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa ku rid cuntada lagu qooyay saliid yar, deji wakhtiga iyo heerkulka oo sug. Inta badan moodooyinka waa inaad walaaqdaa cuntada inta lagu jiro karinta kala bar, laakiin waxaa jira shiilan leh nidaam wareeg Meesha aan loo baahnayn oo inta badan waxtar badan leh.
✅ Miyay ka caafimaad badan yihiin oo ma ka cunto badan yihiin kuwa caadiga ah?
Waxaan horay u soo aragnay in nooca karinta uu aad ugu eg yahay dubista marka loo eego shiilan. Weligeed saas baa la yidhi kuwa shiilan ayaa ka naaxsan marka loo eego saxamada lagu diyaariyo foornada, laakiin annagu waa buunbuunin in aan ugu yeerno Fryer caafimaad qaba.
Waxay u badan tahay in haddii aad si joogto ah u cunto cuntooyinka shiilan ee caadiga ah ku lumin miisaankaaga shiilan cusub oo caafimaad qaba, laakiin laguma talinayo inay yihiin saldhigga cuntadaada. Waxay u muuqataa in ay lahaan jireen dhawrsanaanno aad u badan oo aynaan garanayn waxa loogu yeero: cunto, uumi, hawo kulul ... waa maxay waalli.
Sida wax walba, waxaa jira fikrado kala duwan, iyo kuwa loogu talagalay OCU Way adag tahay inay leeyihiin faa'iidooyin iyo haa dib-u-dhacyo badan.
✅ Maxaa lagu karin karaa iyaga?
Waxaan wali xasuustaa markii ugu horeysay ee ay ila hadlaan, waxay ahayd saaxiibkii i tusay inay iibsadeen si ay u sameeyaan shiilan Faransiis ah. Waxyar ka dib ayay ahayd markii aan taas ogaaday waxaad karin kartaa cunto badan. Waxa ka mid ah kuwa ugu badan ee aad samayn karto:
✔ baalasha digaaga ama bowdada
✔ Hilibka doofaarka
Si ay kaaga caawiyaan sida ugu wanaagsan ee aad uga faa'iidaysan lahayd hawo-shiidiyahaaga kulul, noocyo kala duwan ayaa waxaa ka mid ah a buugga cuntada la gadashada. Kaabayaal wanaagsan oo aan fikraduhu ka dhammaan oo si fiican uga faa'iidayso.
Haddii ay ku qancisay, ha seegin annaga barbardhiga shiilan bilaa saliid ah si aad u dooratid qaabka ugu fiican ee ku habboon waxaad raadineyso.
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Hawlgalka